Kuvandudza App - Kukunda Matambudziko Anowanikwa - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Anokudziridza App, matambudziko
App Kuvandudza - Kukunda Zvakajairika Matambudziko
Sekureva kwechidzidzo cheStatista, paive nevashandisi vemamirioni mazana matatu nezviuru mazana mapfumbamwe pasi rese mu3.9. Pamusoro pekugona kukuru kwemari yemusika wekushandisa, makambani ekutanga anonzwisisa kukosha kwekuita kuti masevhisi avo awanikwe pamafoni emafoni ekuwanika zvakanyanya uye ruzivo rwakanyanya. Kunzwisisa famba kuvandudza kweApp ichapa ruzivo rwakakosha kune vanogadzira maapps, vanamuzvinabhizimusi, vashandisi veapp mobile, nezvimwe.
Seti yezvinetso izvo vanogadzira maapps vanowanzo sangana nazvo pavanogadzira iyo App yevashandisi vavo:
Dambudziko 1: Kufunga zvekuita?
Vagadziri veApplication vanogara vakatarisa kugadzira app kugadzira maapplication anodiwa nevanhu. Kukunda iyi dambudziko kambani inofanirwa kuita nemazvo kutsvakurudza misika uye saka ongorora zvakakosha kudzidza kubva muchidzidzo.
Tarisa uone yedu blog pane iyo Matanho gumi ekuvandudza foni inobudirira
Dambudziko 2: Kuronga zvakanaka mari
Kuvaka App inoda homwe inozivikanwa. Kubudirira kuronga kwemari kunogona kukubatsira kuti uone kana bhizinesi rako richagara kwenguva refu. Pasina hurongwa hwemari, zviri nyore kupererwa nemari uye kupinda muzvikwereti. Nekutevera mari nemari, unogona kuchengetedza bhizinesi rako kunze kwekutsvuka.
Dambudziko 3: Kusunungura yako app padanho chairo
Unofanira kusunungura yako Mobile Anwendung kana yapera, kana iwe unofanirwa kuiburitsa nekukurumidza iwe paunenge uine prototype inoshanda? Iko kune seti yemibvunzo inoisa ivo vanogadzira munyonganiso, uye kune kutya nguva dzose kwekurasikirwa nemugove wemusika.
Dambudziko 4: Zvemukati manejimendi
Iwo mafomu anofanirwa kugara achivandudzwa nemifananidzo yazvino, mavhidhiyo, mifananidzo, nezvimwe. Naizvozvo, seti yehurongwa inofanirwa kuwedzerwa mumusika unorerutsa maitiro eifoni yekushandisa content management.
Tarisa uone yedu blog kurudyi zvemukati manejimendi zano kune ako maapp
Dambudziko 5: Kuvandudza kuoneka kweapp
Vashandisi vane dzimwe nzira dzekutora kubva pamusoro peanopfuura mamirioni 3.5 maapplication anowanikwa mune App Chitoro. Ruzhinji rwezvikumbiro izvi runotowanikwa sekuburitswa kwemahara. Nekudaro, wese mugadziri weapp anofanirwa kuongorora marongero ekuti iyo app ifadze kune wese munhu kuti awane mamwe madownload.
Verenga pamusoro maitiro akanaka ekutengesa nokuti Mobile Apps
Dambudziko rechitanhatu: Kupa hunyanzvi hwenhare uye zviwanikwa
Masangano anowanzo kushaya hunyanzvi hunodiwa mumba kuti aite nemazvo kuronga nekuvandudza kwe Mobile Anwendung. Makambani anotarisa mukugadzira zvinhu zvinopa nyore mukushanda kwavo. Zvakare, kuti vazadzise zvimwe zvinodiwa nevashandisi, ivo vakaburitsa kune a famba kuvandudza kweApp yakasimba.
Dambudziko 7: Kugamuchirwa kwevashandisi uye kusanganisa system
Kubatanidzwa kweSystem haina hukama zvakananga kuvandudza kweApp, asi inoita seinokonzeresa mukugadzira kukanganisa kukuru pakubudirira kweapp uye kutorwa kwemushandisi. Human Resources uye zvikwata zvekutaurirana zvemukati zvinovimbisa kuitwa kwechikumbiro.
Nekuwedzera kukurumbira uye kudiwa kwe Mobile mafomu, hazvishamise kuti mamirioni emakambani, makambani, uye kutanga-kumusoro vari kusvika kune nhare kuvandudza kwesarudzo firms kuti vawane yavo yazvino inotyisa pasi application yesimba yakagadzirwa. Zvinoenderana neongororo ichangoburwa, kune vanopfuura mabhiriyoni mashanu evashandisi venhare munyika, uye kune mamirioni mashanu nemakumi mashanu neshanu evanogadzira Android uye vanogadzira mamirioni 5.9 veIOS munyika. Naizvozvo, isu tinogona kutaura kuti kune hukuru hukuru hwe famba kuvandudza kweApp munguva inotevera.
6 Maitiro ekuvandudza kweApp Akabuda muDenda
Oct 25 | Anokudziridza App, Covidien-19